ISOFTWARE YOKULUNGISA I-BATHROOM EYI-10 (YASIMAHLA KUNYE NENTLAWULO) - UYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokuhlambela Isoftware yokuLungisa i-Bathroom eyi-10 (yasimahla kunye neNtlawulo)
Ngesoftware yokulungisa indawo yokuhlambela ungakhetha isicwangciso sakho somgangatho, wenze uyilo olugqibeleleyo, ungeze izixhobo kwaye ubone ngeprojekthi yakho yokuhlambela egqityiweyo. Ezi nkqubo zokulungisa izindlu zangasese azibizi kwaye ngoku kulula ukuzisebenzisa kunangaphambili. Ngezantsi zi-10 zezona software zilungileyo zokuhlambela onokuzisebenzisa ukwenza uyilo olulungele wena.
Ngokufika kwetekhnoloji yale mihla, ukufumana imithombo kunye nezikhokelo zokulungisa kwakhona igumbi lokuhlambela kukucofa nje kude. Ukucwangciswa kwendawo kunye nemodeli ye-3d ikwangumsebenzi olula njengoko uninzi lwezicelo kunye nesoftware yoyilo lwe-3D sele ifumaneka ukuba isetyenziswe kwi-Intanethi. Oku kushenxisa isidingo sokwenza uyilo ngokungakhathali ngesandla. Izicwangciso zokulungiswa kwegumbi lokuhlambela zinokugqitywa ngemilinganiselo echanekileyo, ukugqitywa kwezinto ezahlukeneyo kunye nokuthungwa konqakrazo nje olumbalwa. Ikwakunika imbonakalo ebonakalayo yendlela indawo yakho eya kujongeka ngayo ngokwenyani.
Nalu uluhlu lwesoftware yoyilo kunye nocwangciso onokuyisebenzisa ekulungiseleleni imizobo yeprojekthi yokulungisa indawo yakho yangasese:
1. Umcwangcisi wegumbi lokuhlambela / igumbi lesitayile (Simahla)
Umcwangcisi wegumbi lokuhlambela elilungileyo sisoftware yokulungisa indawo yangasese onokuyisebenzisa ukwenza iiplani zangasese ze-3D. Unokukhetha kwiitemplate zabo, uyihlele kwisicwangciso se-2D emva koko uyiguqulele kumbono wesithathu. Ukwenza isicwangciso sakho somgangatho kulula njengokutsala kunye nokuwisa. Inelayibrari yempahla ehlelwe kakuhle ebonisa uluhlu olubanzi lwezixhobo onokukhetha kuzo, kubandakanya iithayile, izinto zokuhlambela nezinye izinto.
Kutshanje (2020) benze iwebhusayithi yabo yabangcono. Ngoku umsebenzisi angangenisa isiketshi esirhabaxa sokuhlambela ngemilinganiselo kunye nemifanekiso yoyilo olukhoyo kunye nokuhombisa. Omnye wabayili bethu uya kuthi emva koko enze uyilo olugqibeleleyo ngokupheleleyo ngaphandle kwentlawulo kwaye aluthumele kubo ukuze wonke umsebenzi wenziwe ngumsebenzisi ngumyili wezinto ezifanelekileyo.
Ungayisebenzisa simahla apha: http://www.virtualbathrooms.com/
2. Igumbi lokudweba izilwanyana (Simahla)
Le software inempawu zesicelo esifanelekileyo se-3D ngaphandle kokonakalisa uhlahlo-lwabiwo mali njengoko inokusetyenziswa kwiwebhu simahla. Ngale sicelo, unokwenza isicwangciso se-2d ngokusekwe kwimilinganiselo yokwenyani yegumbi lakho lokuhlambela, yongeza umbala okhethiweyo, unike ukugqitywa, ukwenziwa kunye nokubonwa nge-3D. Ikwabonelela ngezikhuthazo zangasese kunye nemibono onokuziqhelanisa nayo njengoko uzilungisa ngokwakho.
Yisebenzise simahla apha: http://www.roomsketcher.com
3. Tile 3D yoyilo Igumbi lokuhlambela (lihlawulwe)
Tile 3D yoyilo Igumbi lokuhlambela yisoftware ehlawulelweyo yokuyila ubume bepateni kunye nezicwangciso zangasese. Ngaphandle kwemizobo esebenzayo kunye neembono zokwenyani onokuthi uzenze, ikwanendawo yokubala yokugubungela ithayile ekunceda ngokulula ukuba ubale inani leetayile ozifunayo kwiprojekthi yakho.
Inenguqulo yasimahla yedemo efumanekayo yokukhuphela kwi: http://www.tile3d.com/en/
4.I-Bath CAD nguArticad (ihlawulwe)
I-Bath CAD ibonelela ngemizobo ye-photorealistic kunye nezicwangciso ezineenkcukacha ngemilinganiselo echanekileyo. Yenzelwe ngokukodwa abaqeqeshi bezindlu zangasese ababonelela ngoluhlu lwezinto ofuna ukuzithenga kunye noku-odola ukugqibezela iprojekthi yakho yokulungisa kwakhona. Yaphuhliswa ngu Bathstore, inkampani esekwe e-UK ethengisa iimveliso zangasese.
Ungacela ingxelo yohlobo lwedemo yasimahla kwesi sicelo: http://www.articad.com/
5. I-Easy Planner 3d (Simahla)
Umcwangcisi olula we-3D okanye uMcwangcisi weOpun sisicelo sangaphakathi sokwakha ngaphakathi esikunceda ukuba wenze izicwangciso kunye noyilo lwefotorealistic yazo zonke iintlobo zamagumbi kubandakanya igumbi lokuhlambela. Ngokucofa nje iqhosha, umzobo wakho we-2d uguqulwa kwangoko ube ngumzobo we-3D. Kulula ukuhamba ujongano lwayo njengoko uninzi lwemiyalelo sele ibonisiwe.
Ungazama ukusebenzisa esi sixhobo sewebhu kwi: http://opunplanner.com/
6.I-Autodesk Homestyler (Simahla)
I-Autodesk Homestyler yinto elula yasimahla yokusebenzisa isoftware yoyilo lwangaphakathi. Isekwe kwiwebhu, nazo zonke iimpawu zayo zilungele ukusetyenziswa kwiwebhusayithi yazo. Ukudala isicwangciso somgangatho kwiHomestyler kulula njengokufaka ifanitshala, iingcango, iifestile, izinto ezilungiselelwe njalo njalo kwisicwangciso sakho emva koko usiguqula sibe yi-3D.
I-Autodesk Homestyler iyafumaneka ukuba ingasetyenziswa nanini na kwiwebhusayithi yayo: http://www.homestyler.com/
7. I-Smart Draw (ihlawulwe)
I-Smart Draw iyisoftware ye-3D enokusetyenziselwa ukuyila zonke iintlobo zezicwangciso kunye nokubekwa. Nangona kubiza i-197 yeedola kwipakethi esemgangathweni, inikezela ngesiboniso sasimahla. Inamakhulu eetemplate ezikhoyo onokukhetha kuzo kubandakanya iiplani zomgangatho. Isampulu yezicwangciso zezindlu zangasese zinokuhlelwa kwi-intanethi okanye ukuba ukhetha njalo unokwenza ngokwakho. I-Smart Draw ikwadityaniswa nezinye izicelo eziqhelekileyo ezinje ngeLizwi, i-Excel, iPowerpoint kunye neDropbox kwaye ikuvumela ukuba uthumele umzobo wakho ngonqakrazo olunye.
I-Smart Draw iyafumaneka ukhuphelo kwi: https://www.smartdraw.com/
8. UMyili weSithuba 3D (Simahla)
I-Space Designer 3D yenye isoftware esekwe kwisiza esekwe kwiwebhu. Sisicelo esisebenziseka lula esenza ukuba wenze i-2D kunye nemizobo ye-3D yamagumbi okanye izindlu zonke ngaphandle kwemfuno yokukhuphela isoftware. Ukugcina isicwangciso sakho somgangatho kulula njengokutsala kunye nokulahla isenzo. Ilayibrari yayo ebonakalayo ibandakanya ngaphezulu kwe-1500 yefanitshala onokukhetha kuyo.
Ungajonga uMyili weSithuba 3d kwi: https://www.spacedesigner3d.com/
9. Igumbi lokwenza (Simahla)
Igumbi lokwenza isoftware esekwe kwilifu ekuvumela ukuba wenze i-2D kunye nemizobo ye-3D ngokulula. Yinkonzo ekwi-Intanethi yokucwangcisela indawo kunye noyilo lwangaphakathi olusebenza kwisikhangeli sakho. Ikwabonisa imo yokujonga yokuhamba ekuvumela ukuba uhambe kwiprojekthi yakho ekunike umbono opheleleyo wayo. Inezixhobo ezizodwa zokuzoba ezivumela lula ekuzobeni iindonga nokuba zinemilo entsonkothileyo. Igumbi lokwenza nalo linoluhlu olubanzi lwezinto ezikhoyo ezigqityiweyo ezinjengeetiles zeceramic, iikhaphethi, ukhuni, ilitye kunye nephepha lodonga.
Ungayisebenzisa simahla apha: https://roomtodo.com/
10. Ikhaya Lami (Uvavanyo lwasimahla)
Ikhaya nguM sisicwangcisi segumbi esinokukhutshelwa simahla. Isixhobo sokucwangcisa se-3D esibonelela ngokunikezelwa okuyinyani kwendawo yakho. Xa usebenzisa le software, ungaqala ngokukrola ngokukhawuleza isicwangciso se-2D ngokukhetha itemplate esele ilungile eyenziwe ukuba ibekwe egumbini kunye nokuma. Ezinye izinto ezinje ngeengcango, iifestile, umgangatho okanye isiteji emva koko zinokongezwa kwilayibrari yazo. Ukusuka kwisicwangciso somgangatho, ngoku unokuwujonga njengomzobo we-3D. Ikwavumela ukuba ukongeza ngokulula imihombiso kunye nempahla yasekhaya.
Khuphela Ikhaya ngam: https://home.by.me/en/
Ukuba ungathanda izimvo ezingaphezulu zesoftware yasekhaya neyasekhaya yokuhlaziya, jonga indawo yethu kwezona zilungileyo Isoftware yoyilo lwangaphakathi .
Umzala womntu ngekrisimesi imibono yesipho
Iingcamango zokuLungisa iiNdlu zokuhlambela - Iingcamango zoyilo lwegumbi lokuhlambela - Iishawari zodidi - Uyilo lweGumbi lokuhlambela elincinci
izimvo zesipho somfana oneminyaka eli-18 ubudala
enemikhono emide yelokhwe engumtshakazi
yeyiphi isandla onxiba umsesane wakho wokuzibandakanya
Iminyaka eli-10 yesipho somtshato